"… nialanareo … ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny Zanany avy any an-danitra, Izay natsangany tamin'ny maty, dia Jesosy, izay Mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy." 1 Tesaloniana 1:9,10
Meng dia tovovavy sinoa. Anisan’ny lovany tamin’ny rainy ity sary vongana mampiseho demonia, mampahatahotra fatratra ny mponina manodidina. Mitovy halava amin’ny olona izy io, ny endriny dia mikentrona ary ny kibony mibontsina be. Natao tamin’ny tanimanga nodorana izy io, ary poaka aty. Ao an-damosiny, dia misy lavaka voafina tsara, ahazoana mampiditra tanana any anatiny.
Nanankarena i Meng. Rehefa tonga ny jiolahy mpandroba, dia afeniny haingana ao an-kibon’ilay sary vongana ny volamenany, dia lasa mandositra any an-tendrombohitra miaraka amin’ireo mpiray tanàna aminy izy.
Nahomby imbetsaka izany fanaony izany. Indray andro anefa, dia tonga ireto mpandroba nantsoina hoe “devoly mena volombava”, avy lavitra ka tsy matahotra ireo sampin’ny Sinoa. Tahaka ny mahazatra, dia nafenin’i Meng ireo volamenany, dia lasa nandositra izy. Saingy nony tafaverina izy, dia potipotika ilay sary vongana, ary lasa avokoa ny harenany rehetra! Tezitra i Meng, ka niantsoantso hoe: “Tsy andriamanitra ianao, ny tenanao aza tsy hainao narovana akory!”.
Nanjary lasa eritreritra i Meng, hoe misy àry ve ny tena Andriamanitra. Tao amin’ny tanàna iray, tsy dia lavitra an’i Meng, dia nisy fianakaviana kristiana vitsivitsy, nanao fivoriana hanambarana ny Filazantsara. Liana i Meng ka nihaino teny lavidavitra teny, ary gaga izy nahare hoe misy Andriamanitra tsy hita maso, nefa tia ny olona rehetra.
Nanatona ihany i Meng taty aoriana, ary mbola mahimahina elaela. Nohazavain’ireto kristiana taminy ny momba an’i Jesosy. Dia tonga Mpamonjiny koa Jesosy.